Dowlad a Kenya oosoo Bandhigtay Sadex shuruudood oo ay sheegtay in ay Xal u noqon karaan,,, – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dowlad a Kenya oosoo Bandhigtay Sadex shuruudood oo ay sheegtay in ay Xal u noqon karaan,,,
Allhadaaftimo February 18, 2019 February 18, 2019 Uncategorized
Dowladda Kenya ayaa soo bandhigtay Saddex Shuruudood oo ay sheegtay inay xal u noqon karaan muranka dhanka Diplumaasiyadda Somaliya & Kenya ka dhex taagan.
Saddexda Shuruud ee ay Kenya ku xirtay Wada-xaajood Diplomaasiyadeed oo ay la galaan DFS ayaa waxaa lagu kala sheegay:
1-In Somalia ay sida ugu dhaqsaha badan kaga laabato Khariidada lagu soo bandhigay Shirweynihii Dhaqaalaha ee dhawaan lagu qabtay magaalladda London, oo ay Somalia ku sheegatay xuduud-baddeedka Kenya.
2-Inay DFS u sheegto kuwa iibsaday Xirmooyinka Shidaalka iyo Gaaska ee Xaraashkii London inay Somalia lahayn Deegaankaas waa sida ay hadalka u dhigeen.
3-Dowladda Kenya waxay kaloo doonaysaa in Xalka Muranka Xuduud-baddeedka ee u dhexeeya labada Waddan in xal saaxiibtinimo (xaalmastuur) oo la isla oggol yahay wada gaaraan oo ka baxsan Maxkamadda Caalamiga ee ICJ.
Dowladda Somaliya ayaa shalay Warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inaysan marnaba gorgortan ka galeyn Qaranimada dhuleed & midka badeed ee Somaliya
Xigasho Universal tv.
Previous Waftigii Wasiirka Gaashandhiga SLand Oo Dalka Lagu Soo Dhaweeyey.
Next Farmaajo iyo Tarsan oo kulan gaar ah ku yeeshay Villa Somalia “Xogo hoose oo la helayo